Tag Archive for "एनसीसी" - एनसीसी बैंकको शाखा १२५ पुग्यो, ढोरफिर्दीबाट कारोबार सुरु
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसीसी)ले तनहुँ जिल्लाको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका, वडा नं. ८ ढोरफिर्दीमा नयाँ शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । ढोरफिर्दीमा शाखा कार्यालय विस्तार गरेसंगै बैंकको देशभर शाखा संख्या १२५ पुगेको छ । ढोरफिर्दी र आसपासका क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने उद्धेश्यले खोलिएको उक्त शाखाबाट एनसीसी बैंकले प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाहरु सरल तथा सुलभ रुपमा प्रदान... थप पढ्नुहोस्
काठमाडाैं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी)बैंक लिमिटेड र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड बीच बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने गरी चैत्र ११ गतेको दिन सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार एनसीसी बैंकको कर्पोरेट तथा बिभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट महालक्ष्मी लाईफको पोलिसी बिक्री गरिनेछ । सम्झौतामा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स ... थप पढ्नुहोस्
एनसीसी बैंकको मेलौली शाखा औपचारिक रुपमा संचालन
काठमाडौं । एनसीसी (नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स) बैंक लिमिटेडले बैतडी जिल्लाको मेलौली नगरपालिका, वडा नं. ७, मेलौलीमा शाखा कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । औपचारिक रुपमा संचालनमा ल्याएको उक्त शाखा कार्यालयको मेलौली नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण सिंह नायक र बैंक संचालक समितिका सदस्य माधव प्रसाद भट्टले २०७५ चैत्र २ गते, शनिबार संयुक्त रुपमा समुद्घाटन गरेका थिए । साथै बैंक संचालक समितिका सदस्य भट्टले शाखा उद्... थप पढ्नुहोस्
एनसीसी बैंक र जनरल इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल (जिआईसि नेपाल) र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा बैङ्कबीच आज आयोजित कार्यक्रमबीच उक्त सेवा प्रदान गर्ने सम्वन्धी सम्झौता भएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक एस् के तमोटले सो सम्वन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमतिसंगै बैंकका ग्राहक... थप पढ्नुहोस्
एनसीसीको लिलाम सकार्न अब ५ दिनमात्र बाँकी
काठमाडौं । एनसीसी (नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स) बैंकले ७९ लाख १० हजार ९९३ कित्ता शेयर लिलामीका ल्याएको आज ५ दिन बितेको छ । बैंकले लिलामिमा ल्याएको शेयर किन्न इच्छुक लगानीकर्ताले पुस २० गते शुक्रबारसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । पुस ११ गते बुधबार एनसीसी बैंकको शेयर प्रतिकित्ता २१५ रूपैयाँ हाराहारीमा कारोबार भएको थियो भने आज २१४ रुपैयाँमा कारोबार बन्द भएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले लिलामी शेयरमा आवेदन गर्दा... थप पढ्नुहोस्